ကနေဒါဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ငွေကြေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်
ကနေဒါဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲမှာ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ၀၅:၀၀MT အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကနေဒါ ဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးကို အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်. အရောင်းအ၀ယ်သမားများအနေဖြင့်ထိုဆွေးနွေးပွဲကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်.
နောက်ဆုံးပြုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒဆွေး​နွေးပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းကို 0.5%အတိုင်းပဲမပြောင်းဘဲထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်. ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ လတ်တလော ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ယခင် ကနေဒါစီးပွားရေးဒေတာတွေကောင်းမွန်ခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်-ကနေဒါ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေတွေ သေချာရေရာမှုမရှိသေးတာတွေကြောင့် ယခုလာမယ့် ကနေဒါဗဟိုဘဏ် ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒဆွေး​နွေးပွဲမှာတော့ အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်. အတိုးနှုန်းတင်ဖို့မရှိသည့်အပြင် ဘဏ်အကြီးအကဲတွေရဲ့ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ်မှတ်ချက်ကပါ အားပျော့ဖို့ရှိတာကြောင့် ကနေဒါဒေါ်လာကတော့ ဖိအားတွေအောက်မှာသာရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်.